Banyere Anyị - Xiamen Toonney Tungsten Carbide Co., Ltd.
Nabata na Xiamen Toonney Tungsten Carbide
E hiwere Xiamen Toonney Tungsten Carbide Co., Ltd. na 2008, ọ bụ onye na-emepụta ngwaahịa carbide ciment dị elu ka ọ bụ ụlọ ọrụ teknụzụ dị elu steeti na onye ndu nke teknụzụ ụlọ ọrụ carbide ciment nke China. Usoro ngwaahịa a gụnyere mkpanaka carbide ọkọlọtọ, preform carbide, isi oyi na -anwụ anwụ, oghere carbide, warara carbide, akụkụ ahụ, wdg. Toonney dị ezigbo mma na ngwaahịa ahaziri iche.
Toonney nwere osisi ọrụ abụọ, otu dị na Xinglin kpuchie mpaghara 15,000m2, nke ọzọ dị na Guankou na -ekpuchi mpaghara 5000m2, nke ha abụọ kwadebere na ụlọ nrụpụta ihe dị elu nke ụwa (10MPa HIP sintering furnace, ụlọ elu na -ehicha ihe na -eme mkpọchi, igwe na -akpaghị aka, igwe na -aga n'ihu na -aga n'ihu 250T, igwe mgbasa ozi akpaka 150MPa wdg) na nyocha nka nka na otu mmepe, na -elekwasị anya na nyocha na imepụta ihe carbide ciment. Ka ọ dị ugbu a, Toonney guzobere mmekọrịta imekọ ihe ọnụ na mahadum ndị ama ama dịka Mahadum Xiamen, Mahadum South South na Mahadum Sichuan iji wusie ike R&D ya.
Companylọ ọrụ anyị agafeela asambodo sistemụ sistemụ mma mba ụwa ISO 9001, raara onwe ya nye inye ndị ọrụ ụwa ezigbo ihe carbide ciment na ngwọta dị mma site na iwu nke sistemụ njikwa dị elu, mmejuputa iwu nke ịdị mma, njikwa siri ike nke ihe ọkọnọ ọkọnọ. Traceability nke mmepụta usoro.
Ịdị mma nke taa bụ iduga n'ahịa echi
Nkwado ihe ọhụrụ, kwanyere ihe ọmụma ùgwù
Afọ ojuju ndị ahịa bụ naanị akara maka ọrụ anyị
Imekọ ihe ọnụ na -eme ka nrọ rịa ọrụ
N'ime afọ ndị gara aga, site n'ike teknụzụ siri ike, ngwaahịa dị elu na nke tozuru oke, yana sistemụ ọrụ zuru oke, Toonney enwetala mmepe ngwa ngwa, ihe ka n'ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ emeela ka itule na ndepụta teknụzụ na mmetụta bara uru nke ngwaahịa ya. nwetara asambodo ngwaahịa dị elu, wee bụrụ ụlọ ọrụ ama ama na ụlọ ọrụ.
N'ọdịnihu, Toonney ga-aga n'ihu na-enye uru zuru oke maka uru nke ya, na-arụpụta ihe ọhụrụ na teknụzụ mgbe niile, imepụta akụrụngwa, imepụta ihe ọhụrụ na usoro njikwa, yana na-emepụta ngwaahịa dị ọnụ ala karịa mgbe niile iji gboo mkpa nke mmepe n'ọdịnihu. Site na ihe ọhụrụ iji na-azụlite ngwaahịa dị ọnụ ahịa mgbe niile iji gboo mkpa nke mmepe ọdịnihu, yana ịnye ndị ahịa ngwa ngwa ngwa ngwa dị ọnụ ala bụ ịchụso ebumnuche anyị n'esepụghị aka.